Alshabaab oo qirtay guuldarradii ay kala kulmeen duullaankii ay ku qaadeen Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
3rd April 2016 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Afhayeenka Alshabaab, Cali Maxamuud Raage ayaa ka hadlay dagaalkii Alshabaab bartamihii bishii Maarso ku qaadeen deegaannada Puntland iyo ujeedadii ay lahaayeen iyo halka uu ku dambeeyey.
Cali Dheere ayaa qiray in Alshabaab dullaan ku qaadeen Puntland, si meesha looga saaro sida uu yiri maamulka Puntland, Shareecada Islaamkana loogu dhaqo deegaannada Woqooyi Bari Soomaaliya.
“Xarakada Alshabaab waxay 5-tii Jamaadul Awal, 1437 dagaallo xoogan gobolada waqooy-bari kula galeen maamulka Puntland ee xoogga ku heysta goboladaas. Hadafka duulaankaas wuxuu ahaa sidii sharciga Allah loo gaarsiin lahaa, looguna maamuli lahaa deegaanadaas, loogana dul qaadi lahaa maamulka dhaaguudka ee ka arimiya deegaanadaas” ayuu yiri Afhayeenka Alshabaab.
Wuxuu Afhayeenka Alshabaab qiray in dagaalkii ka dhacay Puntland uu khasaare ka soo gaaray Alshabaab oo dad badan laga dilay, kuwa kalana laga qabtay.
“Dagaaladaas waxay mujaahidiintu ku bixiyeen naf iyo maal intaba iyagoo Allaah talo saartay, qadartiisana raali ku ah. waxaan geesiyada howshaas fuliyey ku leenahay Allaha idinka abaalmariyo dadaalkaas aad u gasheen Islaamka iyo ehelkiisa. Allaah waxaan weydiisaneynaa in uu shuhadadiina aqbalo, dhaawaciina caafiyo, maxaabiistiinana soo fakiyo” ayuu sidoo kale yiri Cali Dheere.
Afhayeenka Alshabaab ayaa sidoo kale sheegay in dagaaladaas ay banaanka soo dhigeen sida uu hadalka u dhigay dabadhilifnimada maamulka Puntland oo u qeylo dhaansaday isbaheysiga gaalada NATO iyodowladda xabashida Itoobiya.
“Dagaaladaas waxay soo bandhigeen halka ay gaarsiisan tahay dabadhilifnimada maamulkaas, kaas oo gurmadkii ugu horeeyey ka dalbaday Isbaheysiga saliibiga ee NATO iyo xabashida Itoobiya” ayuu yiri Cali Maxamuud Raage.
Dhankooda ayuu xusay iney jab u geysteen ciidamada mamulka Puntland, wuxuuna yiri “Dhanka kale waxaa Alle mahadiis ah in cadowga uu la kulmay dharbaaxooyin culus mudadii ay dagaaladu socdeen naf iyo maal intaba, waxaase intaas oo dhan barbar socday qal-qal amni iyo khalalaaso siyaasadeed oo argagax weyn ku abuuray danaha reergalbeedka ee mandiqadaas”.
Cali Dheere ayaa hanjabaad cusub u diray dhamaan dhinacayada dagaalka kala horjeeda Alshabaab, isagoo dhallinyarada Alshabaab ku qanciyey in dagaallada dunida qolaba mar ku guuleysato.
14-kii Maarso 2016, waxaa doonyo lagu sheegay ilaa 5 ay dagaallamayaal ka tirsan Alshabaab ka dejiyeen deegaanka Gacarad oo ka tirsan ee gobolka Mudug.
Maamulka Puntland ayaa dhowr dhinac ka weeraray ciidamadii Alshabaab ee halkaas tegay, waxaana maamulkaasi sheegay inuu dilay tiro badan, qaar badanna gacanta ku dhigay, laguna xiray xabsi ku yalla magaalada Garowe.
Ciidamada Alshabaab ee ku jabay dagaalkii Puntland oo u laabtay dhanka gobolka Mudug qeybta maamulka Galmudug ayaa haddana dagaal kala kulmay maamulka Puntland, iyadoo maamulkaasi sheegay inuu dilay tiro badan, intii hartana uu gacanta ku dhigay, lana geeyey Koonfurta Gaalkacyo.